Donald Trump ” Baxrayn Waa dalkii labaad ee Carbeed ee muddo 30 maalmood gudahood ah nabad la qaatay Israel | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Donald Trump ” Baxrayn Waa dalkii labaad ee Carbeed...
Donald Trump ” Baxrayn Waa dalkii labaad ee Carbeed ee muddo 30 maalmood gudahood ah nabad la qaatay Israel
Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa shaaciyey in Israel iyo dalka Baxrayn ee Khaliijku ay gaadheen heshiis meel mar ah oo ay si buuxda ugu hagaajinayaan xidhiidhkooda.
“Waa dalkii labaad ee Carbeed ee muddo 30 maalmood gudahood ah nabad la qaatay Israel” ayuu ku yidhi qoraal uu ku baahiyey bogga uu ku leeyahay Twitter-ka.
Muddo tobanaan sanadood ah ayaa dalalka Carbeed badankoodu go’doomiyeen Israel iyaga oo ku akdaysanayey in ay xidhiidh la yeelan doonaan oo keliya marka khilaafka u dhexeeya Falasiiniyiinta la xaliyo.
Ma jirin wax hadal hayn ah oo ku saabsanaynd in Baxrayn ku dayan doonto Imaaraadka.
Trump oo bishii Jeeniweri soo bandhigay qorshihiisa nabadda Bariga Dhexe oo lagu doonayo in lagu furdaamiyo khilaafka Israel iyo Falastiiniyiinta, ayaa labadan heshiis ba ka odayeeyey.
Ra’isal wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu, ayaa Jimcihii sheegay in uu “la dhacsan yahay” in “heshiis kale oo nabadeed” ay la gaadheen dal kale oo Carbeed.
“Waa waa cusub oo u baryey nabadda. Nabad baa nabad dhalisa, dhaqaalena dhaqaaluu kaabaa. Sannado badan ayaanu nabadda gelinay dedaal lagu gaadho, haatanna nabaddii ayaa midhaheedii noo dhashay” ayuu yidhi.
Baxrayn waa dalka Afraad ee Carbeed ee ku yaal Bariga Dhexe – marka lagu daro Imaaraadka, Masar iyo Urdun- ee aqoonsada Israel tan iyo markii la aasaasay dalkaas 1948.
”Maanta waxa la gaadhay heshiis kale oo taariikhi ah” ayuu Trump ku qoray boggiisa Twitter-ka waxaanu intaa ku daray ”Labadayada saaxiib ee waaweyn Israel iyo Boqortooyada Baxrayn ayaa gaadhay heshiis nabadeed.”
Madaxweynuhu wuxuu sidoo kale qoraalladiisaa uu Twitter-ka ku baahiyey ku lifaaqay nuqul ka mid ah warbixintii ay soo wada saareen saddexda hogaamiye – Trump, Netenyahu iyo dhaxal sugaha taajka Baxrayn Salmaan Bin Xamad Aal-Khaliifa.
Dhawaanahan ba cabsi ay si wada jira uga qabaan Iran, ayaa dhalisay xidhiidho aan rasmi ahayn oo labada dal yeeshaan.
Bishii hore ayaa duulimaadkii ugu horeeyey ee diyaarad rayid ah oo ka kacday Israel caga dhigatay Imaaraadka, arintaas oo loo arkayey in ay tahay talaabo weyn oo loo qaaday dhanka xoojinta xidhiidhka labada dal.
Wiilka Madaxweyne Trump soddoga u yahay sidoo kalena ah la taliyehiisa, Jared Kushner, oo diyaaraddaa la socday ayaa ku tilmaamay heshiiskaa Imaaraadk inuu yahay mid ” gebigiisaba bedeli kara majaraha Bariga Dhexe.
Baxrayn ayaa todobaadkii hore sheegtay in ay duulimaadyada rayidka ah ee u kala gooshaya Israel iyo Imaaraadka u ogolaanayso in ay hawedeeda maraan.
Trump ayaa lagu wadaa inuu Salaasada Washington ku qabto xaflad si rasmi ah loogu saxeexi doono heshiiska Israel iyo Imaaraadka.
Sannadkii 1999 ayaa dalka Mauritania ee ku yaal woqooyiga galbeed ee Afrika oo ah dal xubin ka ah ururka Jaamacadda Carabta uu xidhiidh diblomaasiyadeed la yeeshay Israel, laakiin wuxuu xidhiidhkaa u jiray sannadkii 2010.
Previous articleSheekh Soomow oo eedeyn culus u jeediyay Sii-hayaha Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Cabdillaahi Goodax Barre
Next articleSarkaal ka tirsan dowladda Brazil oo lagu dilay fallaar xilli uu ku sugnaa keynta Amazon
Xisbiga Mucaardka Soomaliland oo weerar Afkaa kala...
Haweenay 3 Caruur ah dhashay oo lagu dilay magaalqda Burca